people Nepal » आत्महत्या गर्न हिँडेकी महिलाकाे बाटाेमै बिवाह : त्यसपछि के भयाे ?…. आत्महत्या गर्न हिँडेकी महिलाकाे बाटाेमै बिवाह : त्यसपछि के भयाे ?…. – people Nepal
आत्महत्या गर्न हिँडेकी महिलाकाे बाटाेमै बिवाह : त्यसपछि के भयाे ?….
जेठ १६, एजेन्सी । एक युवती आत्महत्या गर्नका लागि घरबाट निस्किन्छिन् । बाटोमा उनले एक युवकलाई भेटेर आफ्नो उद्देश्य परिवर्तन गर्छिन् र तिनैसँग बिहे गर्छिन् । यस्तो घटना त प्रायः फिल्ममा देखिन्छ । तर यो वास्तविक जीवनमा भएको छ । भारतको बिहार राज्यको नवादा जिल्लाको शाहपुर गाउँमा यो घटना भएको हो ।
त्यहाँकी पिंकी नामक युवतीलाई उसका ससुरालीका मानिसले अत्याचार गर्ने गर्थे । दिनदिनै उनलाई कुटपिट गरेर उनीहरू उनलाई पागल घोषित गर्ने सूरमा थिए । पिंकीले दिनहुँको अत्याचार सहन नसकेर आत्महत्या गर्ने फैसला गरिन् र घरबाट निस्किन् । ट्रेनमुनि सुतेर मरिदिन्छु भनी उनले निश्चय गरिन् । तर बाटोमा उनले नजिकैको गाउँका अखिलेश माझीलाई भेटिन् ।
अखिलेशले पिंकीको हाउभाउ र कुराकानीबाट आत्महत्याको सुइँको पाएका थिए । त्यसपछि उनले पिंकीलाई खुबै सम्झाए र आफ्नो घर लगे । यता पिंकीका ससुराली र माइती दुवैले उनी हराएको खबर प्रहरीलाई लिए ।
केही दिनपछि पो थाहा भयो पिंकी त बकडझोली भन्ने ठाउँमा कसैसँग बसिरहेकी रहिछन् । उनी अखिलेशसँग बिहे गरेर बसेकी थिइन् । अखिलेशका पिता तथा पूरा परिवारले पिंकीलाई बुहारीका रूपमा स्वीकार गरेका रहेछन् ।
गाउँलेहरूका अनुसार अखिलेश र पिंकीले भेट भएको भोलिपल्टै गाउँको मन्दिरमा बिहे गरेका रहेछन् । दुवैको जात फरक भएपनि समाजमा कुरा नउठोस् भनेर बिहे गरेका रहेछन् । केही मानिसहरूले पिंकी र अखिलेशको फैसलाको प्रशंसा गरेका छन् र पिंकीले जिन्दगीमा अघि बढ्ने फैसला लिएर राम्रो गरिन् भनिरहेका छन् ।